OnePlus5၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကိုစစ်ထုတ်သည် Androidsis
OnePlus5သတ်မှတ်ချက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
Elvis bucatariu | | OnePlus
OnePlus5အယူအဆသည်မကြာသေးမီကပေါက်ကြားမှုများကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်သည်
ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီက OnePlus သည်၎င်း၏အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းကိုပြသခဲ့သည် OnePlus 3လအနည်းငယ်အကြာတွင်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည် OnePlus 3, အခြေခံအားဖြင့်တူညီတဲ့ဒီဇိုင်းကိုထိန်းသိမ်းထားပေမယ့်ပိုမိုအစွမ်းထက် processor ကိုရှိခဲ့ပါတယ်သော။ နွေရာသီရောက်ခါနီးပြီ OnePlus5၏အစီရင်ခံစာသည်တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏ထင်ရှားသောစွမ်းဆောင်ချက်ဖြစ်သည်.
သို့သော်စမတ်ဖုန်းအသစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးထွက်ပေါက်ကြားမှုများကိုမခံယူမီ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းလင်းရမည် ကုမ္ပဏီသည်ဗားရှင်း ၄ ကိုကျော်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်တရုတ်တွင်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့် OnePlus4ဟုခေါ်မည့်အစားမိုဘိုင်းအသစ်ကို OnePlus5ဟုတိုက်ရိုက်ခေါ်လိမ့်မည်။
1 OnePlus5၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ
2 ဖြစ်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းနှင့် OnePlus ၏ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ 5
OnePlus5၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ
ပေါ်တယ်အဆိုအရ PC ပေါ့, လာမယ့် device ကို feature ပါလိမ့်မယ် လုံးဝသက်တမ်းတိုးဒီဇိုင်း, အဘယ်သူ၏ဇာတ်ကောင်သည်သူ၏ဖြစ်လိမ့်မည် 5.5K resolution ရှိသော ၆.၃၃ လက်မမျက်နှာပြင် အချို့အလွန်ချောဘောင်။ ရလဒ်အနေဖြင့်, လက်ဗွေဖတ်စက်နောက်ဘက်သွားပါလိမ့်မယ် Terminal သည် Terminal သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်ရှေ့ခလုတ်များကိုဆက်လက်ပြသလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း (အသုံးပြုသူမှပိတ်ထားနိုင်သည်) ။
ဟာ့ဒ်ဝဲ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, OnePlus5ပါမယ် feature ပါလိမ့်မယ် Qualcomm Snapdragon 835 ပရိုဆက်ဆာနှင့် 8GB RAM အမြန်နှုန်း။ အစပိုင်းမှာတော့ဒါကအံ့သြစရာကောင်းပုံရပေမယ့် OnePlus3မှာ 6GB RAM ရှိပြီးသားပါ။ 8GB သို့တိုးမြှင့်ခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော်လည်းမလိုအပ်ပါ။
terminal အသစ်ကိုလည်းaသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည် ၃၀၀၀ mAh ဘက်ထရီသည်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့် 3.000-megapixel အနောက်ကင်မရာတို့ဖြစ်သည်ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုနှင့် optical zoom။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်း၏အထူသည် ၇ မီလီမီတာသာရှိသည်။
OnePlus5၏ဒီဇိုင်းတွင်မည်သည့်အရာများပြောင်းလဲသွားမည်ကိုယခုအချိန်တွင်မသိသေးပါ က galaxy S8 အဆိုပါအဖြစ် LG က G6 သူတို့ကဖန်ခွက်အဖုံးကိုသုံးတယ်၊ iPhone 8 ကအလားတူချဉ်းကပ်မှုမျိုးလုပ်နိုင်တယ်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်သည်သတ္တုကိုစွန့်လွှတ်ပြီးယူဆောင်လာနိုင်မည့်ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသည် ခုခံလက်မှတ် IP68.
ဖြစ်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းနှင့် OnePlus ၏ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ 5
ဒီဇိုင်းအသစ်နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသော resolution ဖန်သားပြင်နှင့်အတူ OnePlus5သည်၎င်း၏ယခင်ထုတ်လုပ်သူများထက်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပွဲထုတ်နိုင်သည်။ OnePlus2ကိုကြေငြာသောအခါဈေးအသက်သာဆုံးမော်ဒယ်ကိုယူရို ၃၀၀ ၀ န်းကျင်နှင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားပြီးယူရို ၃၉၉၊ OnePlus 300T ကတော့ယူရို ၄၃၉ ၀ န်းကျင်ရှိသည်။
OnePlus5စတင်မိတ်ဆက်မည့်နေ့နှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏စက်ပစ္စည်းများကိုပုံမှန်အားဖြင့်တင်ပြသည် နွေရာသီအစောပိုင်းterminal အသစ်ကိုမတွေ့မချင်းတော့ကြာလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » OnePlus » OnePlus5သတ်မှတ်ချက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
Samsung Galaxy Xcover4ကိုဥရောပသို့24ပြီ ၂၄ ရက်တွင်ရောက်ရှိမည်
Xiaomi Mi6နှင့် Mi6Plus: စျေးနှုန်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများ